Ashahaada la dirirka iyo shacabka Soomaaliyeed maxaa kala haysta
C/laahi Max'ed Faarax
Faafin SomaliTalk: July 12, 2007
Eray bixintaan ayaa ah mid ku cusub sanadahaan danbe dalka Soomaaliya,hadaba su�aasha la is waydiin karo ayaa waxay tahay maxay yihiin Ashahaada la dirku?
Waa Urur ka kooban calooshooda u shaqeystayaal aan diin aaminsaneyn,isla markaasna quudkoodu yahay in ay ugaarsadaan culumada islaamka iyo cid kasta oo ay ku tuhmaan diin ama ay ka muuqato astaan diimeed.
Waa koox damiir laawayaal ah oo ay ka idlaatay dareenka bini aadamino,waxayna ka kooban yihiin dadka loogu neceb yahay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda.
Ururkaan ashahaada la dirirku waxa uu soo shaac baxay markii uu dhacay qaraxyadii maraykanka,taas oo dowlada maraykanku ay ka sameysay daafaha caalamka ururo ama dowlado kala shaqeeya la dagaalanka diinta islaamka meel kastana ku ugaarsada culumada iyo ducaada caanka ku ah fidinta islaamka.
Soomaaliya markii ugu horeysay ururkaan ashahaada la dirirka waxa uu ka bilowday gobolada Puntland iyo Somaliland oo iyagu si habsami leh u fuliyey barnaamijkaan la dagaalanka islaamka.
Maamul goboleedka puntland si cad ayuu uga qayb qaatay iyada oo ay fulineysay hay�adaha sirdoonka ee maamulkaas.
Hay�ada loo yaqaan PIS (puntland intellegence service) ayaa waxa ay ka fulisay goboloda Puntalnd in ay ugaarsato culumada iyada oo taageero balaaran ka heleysa dowlada maraykanka,
Hay�adaan ayaa ilaa hada waxa ay wadaa ugaarsiga dadka islaamka ah.
C/risaaq Afgaduud, Maxamed Cali Gaagaab, C/rashiid Cali Dhuubane
Ragga ugu caansan ayaa waxa ka mid ah hogaamiyaha kooxda imbagaati iyo calooshooda u shaqeysataayal kale oo ay ka mid yihiin, Saciid dayaana , C/risaaq Af gaduud , Maxed Cali Yuusuf Gaagaab, C/rashiid Dhuubane, Maxamed Aadan Bidaar iyo Faarax Aadan Siyaad(Faarax Goobo).
Ragan ayaa sababay in ay galaaftaan culumo aad u fara badan kuwo kalena ay gacanta u galiyaan cidamada itoobiya
ilaa hadana waxan la ogeyn meel ay ku danbeeyeen boqolaal muwaadiniin soomaaliyeed oo laga qabtay deegaamada bandiiradley markii ay ciidamada cadowga itoobiya ay weerar gardaro ah ku soo qaadeen gudaha Soomalaiya.
Dadkaan ayaa lagu daabulay diyaradaha dagalaka itoobiya iyaga oo ka helayey gacan buuxda raga aan kor kusoo xusnay,waxayna ahayd bilo ka hor markii habeenimo loo gacan galiyey nin lagu magacaabo C/xamiid Max�uud Ismaaciil oo diyaarad eylakobtor ah looga qaaday gegida diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo.
Falkaan oo dhaliyey buuq badan ayaa waxaa si toos ah u qirtay in uu ka danbeeyey Godoomiyaha gobolka Mudud C/rashiid Dhuubane,waxana iyana jirta in maamulka Somaliland uusan ka yareysan kan puntland iyaga oo ka siman labada maamul la dagaalan diinta islaamka iyaga oo uga raadsanaya waashinton iyo Addis Ababa raali ahaansho
Waxa ay wada ogsoonyihin umada soomaliaya oo dhan xariga gardarada ee ka fog bini aadinimada ee loo gaystay Sh Max�ed Ismaaciil oo ilaa hada lagu jir dilo xabsiyada Somaliland iyada oo lagu eedeeyey shiikha in uu wax ka sheegay itoobiya iyo maraykanka oo kaliya.
Ashaahada la dirka ayaa waxa uu u soo talaabay dhanka Muqdisho iyada oo looga dhawaaqay urur la magac baxay la dagaalanka argagaxisada,ururkaan ayaa waxaa lagu mideeyey dagaal oogayaashii muqdisho ee kala daadsanaa waxa ay ku bixisay dowlada maraykanku dhaqaale fara badan si ay ula dagaalamaan islaamka.
Tan ayaa waxay horseeday in ay kacaan shacabkii ku noolaa magaalada isla markaasna laga saaro Muqdisho
Ugu danbeyntii waxaa guluf coladeed oo xoog badan ku soo qaaday ciidamada macatab ku dirirka ee itobiya oo kaashanaya dowlada maraykanka.
Laga soo bilaabo waqtigaas waxaa ka socda Magaalada Muqdisho si is daba joog ah xasuuq iyo tir tirid ay wadaan kooxda imbagaati iyo ciidamada itoobiya iyada oo ay bartilmaameedsanayaan goobaha muqadaska ah sida masaajida iyo dugsiyada qur�aanka,isla markaasna xabsiyada u taxaabaya cid kasta oo lagu tuhmo diinta islaamka,kuwaasoo loo dhaadhiciyo xabsiyada qarsoon ee ku yaal gudaha Itoobiya,kaasoo uu furtay Mareykanka oo u dhardhigtay inuu la dagaalamo Diinta Islaamka.
Barya ka hor ayey ahayd markii in ka badan 100 qof lagala baxay masjidka Abuu Hureyra ,waxaana ka horeysay in dad badan lagala baxay xaruntii culumada tabliiqa ee Ah hidaaya,maantana oo ugu danbeysay waxaa laga kaxaystay in ka badan 80 qof masjidkii Bangaariyo ee buula xuubeey.
Isha sawirka Beerdhiga
Waxaa kaloo iyana aan ka bad baadin gabdhaha muslimadka ah ee iyagu u hogaansamay in ay korkooda ku daboolaan xijaabka sidii allaah uu amray waxa maalin kasta lagu dilaa laguna jirdilaa xijaabka
Tan ayaa ah mid ay waajib ku tahay cid kasta oo muslima in ay ka dhiidhiyaan,ayna ka hortagaan looguna diyaar garoobo dagaal dheer oo lagu difaacayo diinta iyo culumada islaamka.
Gari labo Qof kama wada Qosliso
Soomaali oo noqotay looma ooyaan